Schonbrunn Zoo muVienna, yave zvakare kumba ku 500 mhando dzemhuka, kubva 1752. Semuyenzaniso, zoo yakare muEurope inogara nzou yeAfrica uye hofori panda. The 42 maeka eiyo Viennese zoo iri mukati memuzinda uye ine zvimwe zvinoshamisa zvinokwezva zvevana nevabereki.
Semuyenzaniso, imba inonaya mvura mumasango inochengetwa mhuka inzvimbo inotyisa inogadzirwa nevanhu yesango remvura chairo rine mabhanan'ana. Sezvaunofamba-famba uchitenderera kuti uchengete ziso kune maAsia madiki-akatsemurwa otters uye vampire crabs. Pamusoro pe, Polar bere imba, ingwe uye cheetahs, koala imba, uye dzimwe dzimba zhinji dze mhuka dzinoshamisa vakamirira iwe.
Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezve zoo iyi ndechekuti zviripo matiketi akasarudzika yemhuri diki kana hombe, imwe chete yekupinda mu zoo, kana combo ine mukova weiyo aquarium.
Hamburg yakanaka guta-mabhureki ekuenda, uye guta rinonakidza rekushanyira nevana. Iyo Hagenbeck Tierpark muHamburg mumwe muenzaniso wechinhu chinonakidza kuita muHamburg nevana. Ndiyo imwe yenzvimbo dzinotonhora kupfuura dzose muEurope neGermany. Imba yakavhurika imba kune zvinopfuura 1,800 mhuka, zoo inoyevedza ine Arctic Ocean. Iyo Arctic Ocean ndipo paunotanga chiitiko chemhuri, uye shanyira polar mabheya, Penguin, uye mabheya egungwa.
Zoo dzakanakisa muBelgium dzakawedzera zvakanyanya pamusoro pemakore. Iyo zoo yakakura zvakanyanya zvekuti hapana pakati peguta, padhuze neCentral station. Uyezve, iyo zoo's Skywalk icharatidza zvakanyanya kuona kunoshamisa yemagadheni uye imwe yeiyo kure-iyo-yakarohwa-nzira maguta muEurope.
Chimwe chinhu chinoshamisa chinoisa Basel zoo pane yedu 10 Zoo dzakanakisa muEurope, zoo yevana. Pano vana vako vanowana mukana unokosha wekusangana nezvipfuyo zvepasirese, kuvabata, uye vapei chikafu.
Kushanyira zoo chiitiko chinoshamisa chekunze kwemhuri yese. Green magadheni nemasango, mhuka dzinoshamisa nemiti, inonakidza uye inonakidza vana. The 10 Zoo dzakanakisa muEurope kushanyira nevana vako, ndiwo matombo eEurope akavanzika uye akakosha kanenge kuzara kwezuva-rwendo.
Unoda here kupinza yedu blog positi "10 Zvakanakisa Zoo Kuti Ushanyire Nevana Vako MuEurope" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-zoos-visit-kids-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)